Ungazilungisa njani iingxaki zam kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 432
Nge IZiko loNcedo le-Twitter, uMsebenzisi unokusombulula iingxaki ezinxulumene neAkhawunti yakhe yoMsebenzisi: Ukungena, ukumisa iAkhawunti, iProfayile eHacked kunye nokuphucula ukhuseleko lweAkhawunti yakhe eqongeni.
Umsebenzisi unokusombulula iingxaki kwimicimbi ngokubanzi yokusetyenziswa: Izaziso, iifoto kunye neevidiyo, imibuzo enxulumene neProfayile yakhe, Ubuqhetseba besazisi, uxhatshazo okanye ukuxhatshazwa, ubuqhetseba okanye umyalezo ongafunekiyo.
Umsebenzisi wazisiwe kwiZiko loNcedo likaTwitter lakhe Imigaqo nemigaqo-nkqubo Ukusetyenziswa kwenethiwekhi yoluntu Oku kuya kukukhokela xa usenza upapasho, uthatha inxaxheba kwiincoko, kwiMiyalezo, ukuze ungenzi naluphi na uhlobo lokuxhaphaza kwaye wophule imigaqo.
Inqaku elitsha le-Twitter leJar
I-Twitter inike ingxelo entsha umsebenzi obizwa ngokuba yiTip Jar, NgeSpanish ithetha ingqayi yeengcebiso; eya kuthi iququzelele uMsebenzisi ukuba ahlawule abanye ngokubambisa amehlo, ukukhuthaza, ukuqonda kunye nokukhuthaza iTwitter.
Ngokwe-Twitter, uMsebenzisi uyazi ukuba Iakhawunti yenziwe ukuba incam yeJar xa ubona i icon yeJar Jar ecaleni kwe Landela iqhosha kwiphepha leProfayile yakho. Ukuhlawula, kuya kufuneka ucofe i icon kunye nemenyu yokuhlawula eyenziwe nguMsebenzisi ukuba ivele.
Emva koko, khetha ukuba yeyiphi inkonzo oyikhethayo yokuhlawula kwaye iya kuba njalo isuswe kwi-Twitter kwindawo apho ungabonisa khona inkxaso yakho kwimali oyikhethayo. Ingcebiso ngeJar ibandakanya iinkonzo ezinje nge: PayPal, Venmo, Patreon, Cash App kunye neBandcamp.
KUTHENI UFANELE UKUBEKA IINKCUKACHA ZOMTHETHO KWI-TWEET?
Indima ye Iifonti zomgca del Tweet kukunceda uMsebenzisi ukuba abone ngcono ukuba iTwitter yapapashwa njani. Iimpawu ezinjalo, zongeza umxholo ngakumbi kwi-Tweet kunye nombhali wayo, ukuququzelela ukutolikwa okungcono kunye nokuqonda kwenjongo yayo.
Ukuba uMsebenzisi akawazi umthombo, ufuna njalo fumana ulwazi oluthe kratya kwaye uthathe isigqibo sokuba ngaba umxholo unokuthenjwa; Ukwenza oku, kufuneka: Cofa kwiTwitter ukuya kwiphepha leenkcukacha; Emazantsi e-Tweet nguMthombo woMthombo, umzekelo: i-Twitter ye-Android.
Ithegi ye-Twitter yaBathengisi kwiiTweets ibonisa ukuba iiTweets zenziwe kusetyenziswa iifayile ze UMdali weeNtengiso ze-Twitter. Kwiimeko ezithile, uMsebenzisi unokujonga ukuba ezinye iiTweets zivela kwisicelo ngaphandle kwe-Twitter.
Xelela ibali lakho kwi-Twitter
Ukuba uMsebenzisi ufuna xelela ibali lakho, I-Twitter ibonelela ngale misebenzi: Yenza umsonto weeTweets ngenjongo yokufezekisa eyona mpembelelo, fumana uluntu lwakho ngezihloko kunye noluhlu, ulungelelaniswe kwaye uncede ukusasaza igama nge-hashtag.
Ukongeza, uMsebenzisi kufuneka hlala wabelana kunye noluntu lwakho olusebenzisa i-Retweets ubeke izimvo okanye hayi, thumela iifoto kunye neevidiyo kunye nabalandeli bakho kunye noluntu lwakho ukubamba ngakumbi.
Umsebenzisi ufuna ukwabelana ngokwenzekayo ngoku phila amaxesha; kwaye wenze ngokwezifiso iProfayili yakho, apha i-biografi kufuneka ihlale ihlaziywa kunye nomyalezo wakho wakutshanje othunyelwe phezulu.
1 Inqaku elitsha le-Twitter leJar
2 KUTHENI UFANELE UKUBEKA IINKCUKACHA ZOMTHETHO KWI-TWEET?
3 Xelela ibali lakho kwi-Twitter